University of Dundee - Study na United Alaeze. Education Bro
University of Dundee Nkọwa
Echefukwala atụle University of Dundee
Idebanye aha na University of Dundee
The University si pụrụ iche agwa abịa site anyị nwee ike inwe ma aspirational na ala na-ala. Anyị na-enwe ike ngwakọta n'ala-agbasa ọgụgụ isi nweta na uru ngwa.
The University nke hụrụ ọtụtụ mgbanwe ebe ọ bụ na ọ ghọrọ otu nọọrọ onwe ha na alụmdi na 1967. A onwe soro a 70 afọ mmekọrịta University of St Andrews, ma anyị isi ebumnuche na-anọgide.
Anyị kwughachiri a ebumnuche anyị Mgbanwe Vision. Ọ bụ ihe anyị na-eme taa na ọ bụ ihe anyị na-eme. Ya bụ:
“gbanwee ndụ n'ógbè ha ma n'ụwa site na ihe e kere eke, nkekọrịta na itinye ihe ọmụma.”
Taa, anyị na-egosipụta nke a ebumnuche n'ọtụtụ ụzọ:
kachasịnụ mmadụ na-ezi na nnyocha;
inye onyinye iji na-elekọta mmadụ, akụ na ụba na omenala ndụ nke Scotland na wider ụwa;
n'ịkpụzi n'ọdịnihu site idozi mkpa real-nsogbu ụwa.
Nzube anyị ghọọ Scotland si eduga University. Anyị chọrọ ịbụ ndị kasị mma na ihe anyị na-eme ka ihe anyị na-ahọrọ ime, na-ghọtara n'ụwa nile maka àgwà nke anyị na-agụsị akwụkwọ na mmetụta nke anyị nnyocha.
Anyị na-chụpụrụ site ọchịchọ na-edozi ọkpụrụkpụ nsogbu, na ga-elekwasị anya na mgbalị anyị na atọ na ebe:
Iji zuru ụwa ọnụ ego na a adigide ụzọ
Innovating site design
Rụọ ọrụ ahụ ike na wellbeing
Anyị ga na-arụ ọrụ gafee isiokwu ókè; eweta nka na echiche dịrịtara iche. Nke a ga-enyere anyị aka ebịne nsogbu ke ọhụrụ, ịma aka ma na-arụpụta ụzọ. Anyị kwadebe anyị mkpara na anyị na ụmụ akwụkwọ ndị e ji ike real-ụwa mmetụta, aka gwọta zuru ụwa ọnụ nsogbu ma gbanwee ndụ.
campus Shops: Location na ndepụta nke ụlọ ahịa dị na campus seeCampus Map.
Chaplaincy: The uka, kọfị mmanya na ezumike dị maka ojiji maka ọrụ, ihe, ngosi, ọzọ, nzukọ, nzukọ ọmụmụ na nri ehihie concerts.
Conference & -anọ amụ ihe: Ụlọ ọrụ dị maka hire gụnyere a ogbako center, ọzụzụ okụre, nzukọ ọmụmụ ụlọ, obibi, na ụlọ ihe nkiri.
DNA sequencing Services – -ahụ The sequencing Service, School of Life Sciences
Duncan nke Jordanstone College Materials Shop (dị maka esịtidem ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ naanị).
IT Oke ime ụlọ na IT Facilities (dị maka esịtidem amụrụ na mkpara were naanị).
Library & Learning Centre: The LLC nwere isii isi saịtị na 24/7 ohere agụmakwụkwọ e-akụ na mebere mmụta gburugburu ebe obibi. Students, mkpara na mpụga òtù na-nnọọ ka eji LLC si ọrụ.
egwuregwu: The Institute maka Sport na-emega awade ụlọ ọrụ maka ego a kwụrụ maka egwuregwu na ihe omume ndị ọzọ e.g. ụlọ ọrụ sports ụbọchị; nzukọ ọmụmụ; quad ọzụzụ sessions. Corporate otu nchịkọta ndị dịnụ.
Duncan nke Jordanstone College of Art & Design
Center maka Archive na Ozi Studies
Learning na Teaching
Clinical Nkà Center
Cuschieri Nkà Center
Center maka Legal & Forensic Medicine
Division maka Ntuziaka Nne na Nna Medical Education
Division maka UG Medical na Medical Sciences Education
Mei – nkwado
School of ara na Health Sciences
post na-eru eru
Center maka Anatomy na Human Identification
Accounting na Finance
Center maka Energy, Petroleum na Ịnweta Iwu na Policy
Center Mmiri Iwu, Policy na Science (n'okpuru nkwado nke UNESCO)
Management na Marketing
Town na Regional Planning
Ina a University dị na Dundee bilie dị ka akụkụ nke a ije – ỌTỤTỤ nke ibu ulo oru emmepe nke Britain n'oge ahụ – maka ndọtị nke na-emesapụ aka mmụta na ọganihu nke oru nkuzi.
na 1881, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na nke amuma na mmesapụ aka nke Dr John Boyd Baxter na Miss Mary Ann Baxter nke Balgavies – distantly yiri òtù a ọgaranya na akpa obodo ezinụlọ – University College, Dundee, e tọrọ ntọala dị ka otu nọọrọ onwe ha agụmakwụkwọ alụmdi maka
'Akwalite mmụta nke mmadụ nke ma sexes na-amụ Science, Literature na Fine Arts '.
N'agbanyeghị onwe ya, na College enweghi onye nwere ike award degrees na ruo afọ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ e kwadebere maka mpụga ule nke University of London. N'etiti ndị na mbụ nkụzi bụ ndị ikom nke oké elu -gụnyere (nye ha ihe ha mesịrị utu aha):
Sir William Peterson, na College mbụ Isi, onye e mesịa Isi nke McGill University, Montreal;
Sir Alfred Ewing, mgbe e mesịrị Isi nke Edinburgh University;
Sir D'Arcy Thompson, na bayoloji;
Sir Patrick Geddes, ndị ọkà na obodo planner;
na Sir William McCormick onye ga-aghọ ndị mbụ odeakwụkwọ nke Carnegie Trust, na mgbe e mesịrị mbụ onyeisi oche nke University Grants Committee.
na 1897 University College ghọrọ akụkụ nke University of St Andrews. Nke a n'otu na-eje ozi na-enye okwu obodo mmetụta na e kwesịrị a njikọ dị mkpa dị n'etiti ochie na ndị ọhụrụ na agụmakwụkwọ omume, na na a venerable alụmdi na a obere obodo na a n'oge a oruru na a nnukwu obodo nwere ike zuo ezu ọ bụla ọzọ na a n'ụzọ bara uru ma.
na 1954, ntarama n'elu n'usoro iwu ochichi obodo mgbanwe n'ime University of St Andrews, University College, na-eme amara, nkwenye nke ya n'iru eze na Queen, e renamed Queen si College. mgbanwe ndị a, nke gụnyere incorporation nke Dundee School of Economics na College, ezie na ha mma ya ọnọdụ n'ụzọ, ekpe ya dị ka akụkụ nke University of St Andrews. The Ubara mgbali n'elu mahadum ebe na ndị sochirinụ na-apụta ìhè mkpa mụbaa ozizi na nnyocha ụlọ ọrụ na Dundee, mesikwuru a local mmetụta nke ogologo-eguzo na ihu ọma nke elu nke College ka nọọrọ onwe ha na mahadum ọnọdụ.
The Committee on Higher Education n'okpuru onyeisi oche nke Jehova Robbins na-atụ aro ya kọọrọ nzuko omeiwu na October 1963 na
'Dịkarịa ala otu, na ma eleghị anya abụọ, nke ọhụrụ mahadum ntọala kwesịrị ịbụ na Scotland '.
The Government mma na nnabata nke Filiks dị mkpa ka ike a mahadum na Dundee, na na 1964 na University Court nke University of St Andrews họpụtara ihe Ọmụmụ Advisory Committee, n'okpuru onyeisi oche nke Mr R. B. McCallum, na nna ukwu nke Pembroke College, Oxford, iji nye ndụmọdụ na n'usoro ochichi nke chọrọ University na na agụmakwụkwọ nmepe na-eme na ya. na 1966, na ndabere nke na-atụ aro mere site Advisory Committee, na University Court na Council of Queen si College osụk a nkwonkwo aririọ na mposi Council achọ Onyinye nke a Royal Charter guzosie University of Dundee. A arịrịọ e mma na, na okwu nke Charter, Queen nke College ghọrọ University of Dundee na nke mbụ nke August 1967.
na 1974 na University kere a Faculty of Environmental Studies nke irè degrees nke Ụlọ Akwụkwọ nke Architecture na Town na Regional Planning nke Duncan nke Jordanstone College of Art. site 1988 niile ogo ọmụmụ awa na College na-irè site University. Nke a mmekota n'etiti abụọ oru mere ka a iwu mmakọ nke College na University na mmetụta si 1 August 1994 na College aghọ a ngalaba nke University.
na 1995 na University nke ọma na ichebe, on a asọmpi ndabere, nkwekọrịta si Scottish Office Health Department maka tupu ndebanye ọrụ nọọsụ na midwifery akwụkwọ Fife na Tayside. Nke a mere ka Tayside College of Nursing na Fife College of Health Studies aghọ akụkụ nke University si 1 September 1996 dị ka a otu School of Nursing na midwifery n'ime ngalaba nke Medicine na Dentistry nke e mechara renamed, ngalaba nke Medicine, Dentistry na Nursing.
na December 2001 na University jikọrọ ya na Dundee campus nke Northern College (nke Education) kee Faculty of Education na Social Ọrụ.
Ị chọrọ atụle University of Dundee ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Dundee na Map
photos: University of Dundee ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Dundee.